သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ ( ဇာတ်လမ်းနှင့်တကွ သိချင်ပါသည်။) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ ( ဇာတ်လမ်းနှင့်တကွ သိချင်ပါသည်။)
ရေးသားသူogyi s@m on May 7, 2012 at 3:04pm in ဆွေးနွေးခြင်း
ဗုဒ္ဓပိဋကတ်လာ မှတ်တမ်းများအရ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သက်သေသာဓကဇာတ်လမ်းများဖြင့် (ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဆို လုံလောက်ပါသည်)ဖေါ်ပြပေးပါရန် ဆရာတော်များနှင့်တကွ ပညာရှင် အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်ပါသည်။
၁) ဥဂ္ဃါဋိတညူ ပုဂ္ဂိုလ် = မြတ်စွာဘုရားအားထူးတွေ့ရပြီး တရားအကျဉ်းမျှ ကြားနာရရုံဖြင့် တရားထူးရသူ။ ၂) ၀ိပဉ္စိတညူ ပုဂ္ဂိုလ် = တရားအကျဉ်းဟောရုံဖြင့် နားမလည်၊ အကျယ်ဟောပြမှ တရားထူုးရသောသူ။
၃) နေယျပုဂ္ဂိုလ် = အကျဉ်းအကျယ်ဟောရုံဖြင့် သဘောမပေါက် အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ဆွေးနွေးမေးမြန်းပြီး ဘာဝနာပွါးမှ တရားထူးရသူ။
၄) ပဒပရမ ပုဂ္ဂိုလ် = တရားနာခြင်း ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း ဘာဝနာပွါးများခြင်းများ ပြုလုပ်သော်လည်း ဤဘ၀၌ တရားထူးမရနိုင်။နောက်နောင်ဘ၀များတွင် တရားထူးရရန် အထုံဗီဇအဖြစ်သာ ရရှိသူ။ ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) Like0members like this
Permalink htin lin thar သည် May 7, 2012 8:35pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ thanks
Permalink ဦးခင် သည် May 7, 2012 11:23pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ (၁) ပဉ္စဝင်္ဂီငါးပါးထဲက ပထမဦးဆုံးဓမမစင်္ကြာတရားကိုနားကြားပြီး တရားထူးရသူ(၂) ပဉ္စဝင်္ဂီထဲမှာကျန်၎ဦးတို့သည် ဓမ္မစင်္ကြာအကျယ်ကိုဆက်ဟောပြီး ကျင့်မှတရားရသူ(၃) ယခုခေတ် တရားကျင့်သူများ (ဥပမာ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဲ့သို့ ရက်ပေါင်း၄၅ ရက်ကျင့်ကြံပြီးမှတရားထူးရသူ(၄) ယခုခေတ် တရားလိုက်စားသော်လည်း တရားထူးမတွေ့ပါပဲ ကျင့်ကြံမှုအကျိုးရခဲ့ပြီး အနာဂါတ်ဘဝအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသူများ
Permalink ogyi s@m သည် May 8, 2012 1:19amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စဉ်းစားကြံဆပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့ ဦးခင်... ရေ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။
တခြားသူတွေ ဖြေကြားမယ့် အဖြေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
၀ိုင်းဝန်းဖြေလိုက်ရင် ပုဂ္ဂိုလ် တော်တော်များ ရလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက် မတူတဲ့အတွက်
ပေးလာမယ့် အဖြေကလည်း (ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း) မတူလောက်ပါဘူး။
Permalink U Hla Soe သည် May 9, 2012 12:00pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အလွန်ကောင်းပါသည်၊ ဆရာဦးခင် ဆွေးနွေးချက် မှတ်သားအပ်ပါသည်။ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးဟောကြားချက်များ အရဆိုသော် ပါရမီအရာသည် ခုခေတ်လူများ အလုပ်မဟုတ်တော့၊ ဖြစ်ပျက်သာရှု. ဝေဒနာ နဲ့ တဏှာကြား ဘုရားဖြစ်ပါသည် ဆိုပါသဖြင်. တဏှာမလိုက် အောင် အဖြစ် နဲ့ အပျက်သာရအောင် ရှု. တရားထူးရနိင်ပါသေးတယ် ဆိုတာကို အားထားရကြောင်း ဆွေးနွေးရရှိ ပါရစေ။
Permalink minkhantnaing သည် May 11, 2012 11:51pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ဖြေတော.ဖြေကြည်.မယ်ဗျာမှားရင်လည်းခွင်.လွှတ် နံပါတ်(၁)ပုဂ္ဂိုလ်က အသျှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းလျှာ လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူဟာပဉ္စ၀င်္ဂငါးဦးထဲကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ.အသျှင်အဿဇိဆီက ယေဓမ္မာဟေတု...အစရှိတဲ.တ၇ားကိုတစ်ပိုဒ်အကျဉ်းမျှနာရုံဖြင်.သောတာပန်တည်သွားတယ်လေ (၂)ကတော.သူ.သူငယ်ချင်းအသျှင်မောဂ္ဂလာန်အလောင်းလျှာပါဘဲသူကတော.တ၇ားတော်ကိုအကျဉ်းမဟုတ်ဘဲအစအဆုံးနာလိုက်မှသောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ် ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကတော.သာသနာတော်နှစ် တစ်ထောင်အတွင်းမှာဘဲရှိတယ်လို.ဆ၇ာတော်တွေဟောတာကြားဘူးပါတယ် ဒီနှစ်ဦးဘဲ၇ှိတယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားပုဂ္ဂိူလ်တွေလဲ၇ှိဦးမှာပါဒီနှစ်ဦးကထင်ရှားလို.ပါ(၃)ကတော.ဒီခေတ်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိူလ်တွေလို.ပြော၇လိမ်.မယ်ဗျ သာသနာနှစ်(၁၀၀၀)ဒီဘက်ကရဟန္တာကြီးတွေကစလို.ပေါ.ဒါပေမဲ.တိဟိတ်(အလောဘ၊အဒေါသ၊အမောဟ၊ဆိုတဲ.ဟိတ်သုံးပါတဲ.လူ)ပုဂ္ဂိုလ်မှကျွတ်မှာနော် ဒွိဟိတ်(အလောဘ၊အဒေါသ)ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမကျွတ်ဘူး သူကအဓိကဖြစ်တဲ. အမောဟဆိုတဲ.ပညာဟတ်မပါလို.ပါ(၄)ကတော.ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒွိဟိတ်၊အဟိတ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသူတို.ကတော.ဘယ်လောက်ဘဲကြိုးစားကြိုးစားဒိဘ၀တရားထူးမရနိုင်ပါဘူး ကျနော်သိသလောက်တော.ဒါပါဘဲ ကျနော်တို.မိတ်ဆွေတို.လဲဒွိဟိတ်လား၊တိဟိတ်လားသိချင်၇င်တော.တ၇ားကိုမှတ်မှတ်သားသားနာပြီးကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ကြည်.ကြပါစို.ဓမ္မ မိတ်ဆွေ
Permalink ogyi s@m သည် May 12, 2012 12:18amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ စိတ်ဝင်တစား ပြန်လည် ဖြေကြားပေးတဲံ့ minkhantnaing ကျေးဇူးပါ။ တိဟိတ်ဆိုရင်တော့ တရားရဖို့ နီးစပ်တာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ဒွိဟိတ်ဖြစ်နေလည်း တရားအားထုတ်တာ အလကားတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အထုံဖြစ်သွားတာပေါ့။
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"8 minutes agodimplemit leftacomment for yarmoe"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"10 minutes agoကောင်းမြတ်မင်း leftacomment for မြူနှင်းမှုံ10 minutes agodimplemit leftacomment for kyiwinmon"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်…"13 minutes agoမြူနှင်းမှုံ leftacomment for ကောင်းမြတ်မင်း"ဓနုလေးရယ် ချစ်လိုက်တာလေ
ယောင်္ကျားခလေးလေး…"19 minutes agoမြူနှင်းမှုံ leftacomment for ကောင်းမြတ်မင်း20 minutes agonweyee commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…'"အလွန်ကိုကောင်းပါ၏။ ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးရဲ့ ဘာသာခြားနဲ့လက်ထပ်ရပုံကိုသိခွင့်ရရင် တင်ပေးပါဦးနော် . .…"29 minutes agoKO KO liked မြတ်သွင်ကို's blog post 'ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အကြောင်း အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ် ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ)'38 minutes agoucandima posted photos3more…51 minutes agoKO KO liked thein wai's blog post 'သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။'1 hour agoucandima commented on ucandima's albumမွေးရပ်မြေမှတစ်ညတာတရားပွဲ1 hour agoမူကြိုဆရာ posted blog postsသာသနာမည်သူ ပြုသနည်း“… ဓမ္မပဒဂုဏ်ရည် …”မဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)3 more…2 hours ago More... RSS